तपाईंको साझा इजलास
काठमाडौँ – स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ को जारी मतगणनाको परिणाम आउनेक्रम जारी छ । आज साँझ ८ बजेसम्म निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा प्रविष्टि भएअनुसार ४८५ स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । मुलुकभर ७५३ पालिकाका लागि ३५ हजार २२१ पद छन् । गत
बिर्तामोड । नेपाली कांग्रेसले पूर्ण अपेक्षा गरेको बिर्तामोड– ३ मा एमालेको प्यानल नै निर्वाचित भएको छ । एमालेका वडाध्यक्षका उम्मेद्वार मदन बुढाथोकीसहित प्यानल नै निर्वाचित भएको हो । बुढाथोकीले २२६३ मत प्राप्त गरिरहँदा गठबन्धनका उम्मेद्वारले ११४१ प्राप्त गरेका छन् । सो वडाको महिला सदस्यमा धनसरी
बिर्तामोड । बाह्रदशी गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्षमा एमालेका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्षका उम्मेद्वार देवेन्द्र चम्लागाई र उपाध्यक्षमा शान्ता खरेल निर्वाचित भएका हुन् । एमालेले गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित वडा नं. ६ मा प्यानलै जितेको छ । १,२,३, ७ कांग्रेस, ४ स्वतन्त्र र ५ नंम्बर वडा
बिर्तामोड । बाह्रदशी गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्षमा एमालेका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्षका उम्मेद्वार देवेन्द्र चम्लागाई र उपाध्यक्षमा शान्ता खरेल निर्वाचित भएका हुन् । एमालेले गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित वडा नं. ६ मा प्यानलै जितेको छ । १,२,३, ७ कांग्रेस, ४ स्वतन्त्र र ५ नंम्बर वडा राप्रपाले जितेको छ । एमालेको प्रतिष्पर्धी नेपाली कांग्रेस थियो । […]
जनमतको हिसाबले एमाले देशकै ठूलो पार्टी : ईश्वर पोखरेल￼
मोरङका १० वटा पालिकामा एमालेको अग्रता
बिर्तामोडको मेयरमा गठबन्धनभन्दा एमाले ४०६ मतले अगाडि
झापामा १७ वडाको नतिजा सार्वजनिक
मेचीनगर – राजनीतिप्रति खासै चासो नराख्ने किसान जाति चुनाव नजिकिँदै जाँदा चनाखो हुँदै आफ्नो माग राख्न सक्ने भएका छन् । मुलुकमै झापाको मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र छरिएर रहेको उक्त समुदायले यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा भोट माग्न आउने दलहरूलाई आफ्नो माग पूरा
चन्द्रकला भण्डारीझापा । छिमेकीका नानीहरु ड्रेसमा सजिएर बोर्डिङ स्कुल गएको
बिर्तामोड । विएण्डसी अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईले हल्दिवारीबाट एक
काँकडभिट्टा । रूद्र–गौरी, श्री–अम्बिका ओली प्रतिष्ठानले मानव हित तथा सकारात्मक
विराटनगर । बालविवाह नियन्त्रणका लागि सचेतना आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले सुझाव
भूपेन्द्र थापा मगर बने चाैथाे नेपाल आइडल
बिर्तामोड । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (नेशनल प्याब्सन) ले विद्यालयमा हप्तामा दुई दिन (आइतबारसमेत) बिदा दिने निर्णय फिर्ता
शनिबार र आइतबार विद्यालय बन्द गर्नू [पत्रसहित]
काठमाडौं । सरकारले हरेक साता शनिबार र आइतबार विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सातामा शनिबार र आइतबार दुई
चन्द्रकला भण्डारीझापा । छिमेकीका नानीहरु ड्रेसमा सजिएर बोर्डिङ स्कुल गएको देख्दा मेचीनगर नगरपालिका–९ की ७० वर्षीया ज्योति किसानलाई आफ्ना नानीलाई
विएण्डसीका सञ्चालक प्रसाईद्वारा हल्दिवारीका एक हजारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा
मेचीनगरमा बाथ रोग सम्बन्धी शिविर
शनिश्चरे नगर अस्पतालको शिलान्यास
धुलावारी र बोष्टर्नको जीत